I-Kandi Tower, i-Grosvenor square w / uphahla phezulu / i-gym / pool. - I-Airbnb
I-Kandi Tower, i-Grosvenor square w / uphahla phezulu / i-gym / pool.
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguTyler
"Zola uze ekhaya kweli gumbi limnandi lisanda kulungiswa. Ibekwe kanye kumbindi wedolophu yase-Angeles ishishini kunye nesithili solonwabo. Iindwendwe ziya kuziva zisekhaya kwiyunithi yethu ene-air-conditioning ngokupheleleyo, ibhedi enkulu, iWifi, iTV's kwindawo yokuhlala. kunye negumbi lokulala.Indlu yi-62 sqm, ibekwe kumgangatho we-3 weGrosvenor Square Kandi Realty.Ibekwe kufutshane nayo yonke into.Isikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe saseClark, iivenkile ezinkulu, iibhari, kunye neendawo zokutyela zonke zingaphakathi kwemizuzu emi-5-10 yokukhwela.
Le ndawo yodwa ngokwenene. Uzoziva usekhaya xa uhlala apha. Iyunithi yeyakhe nabani na. Nokuba ningamaqabane ahamba ngempelaveki okanye ningumhambi omnye olungele ukuzikhulula kwisitrato esihambayo. Ikhululekile, inika ukhuseleko olukhulu, kunye ne-pool emangalisayo yokuqubha. Kwigumbi lokulala kunye nendawo yokuhlala ine-air conditioners eyahlukileyo, ii-TV ezi-2, i-WiFi yamahhala, kunye nommandla omkhulu wokupheka. Zonke izinto ezisisiseko zokupheka zibonelelwa ekhitshini, kunye ne-microwave ukuze uzenzele ekhaya ngokupheka.
Isakhiwo ngokwaso sisondele kuyo yonke into. I-SM mall, isitrato sokuhamba, i-trike terminal, kunye neendawo zokutyela zonke zingaphakathi kohambo lwemizuzu eli-10. Ngelixa isikhululo seenqwelomoya saseClark siyimizuzu eli-10 kuphela ngemoto. Ngaphandle kukho i-24/7 yevenkile efanelekileyo kunye nomatshini we-ATM owusebenzisa nanini na ngexesha lokuhlala kwakho. Esi sakhiwo sinikezela ngeendawo zokupaka kumgangatho ongaphantsi oneCCTV kunye noonogada abamileyo abangama-24/7.
Ukuhamba nje yimizuzu emi-3 ukusuka kwi-Check Point, ukuhamba imizuzu emi-5 ukusuka kwi-SM Mall kunye nokuhamba ngaphantsi kwemizuzu emi-5 ukusuka kwisithili solonwabo seFields Avenue. Ikufutshane nazo zonke izinto eziluncedo kwaye okwangoku ikwindawo ezolileyo.
Izinxulumani zam uMichal okanye uMonira baya kukuvuyela ukudibana nawe xa ufika kwaye bakuncede nangayiphi na indlela ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Angeles